Thailand waxay ogolaatay Dhirta xashiishada wax ka yar 0,2% THC • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Thailand waxay ogolaataa dhirta xashiishadda wax ka yar 0,2% THC
Thailand waxay ogolaataa dhirta xashiishadda wax ka yar 0,2% THC
albaabka daroogada December 23 2021
maqaal by daroogada December 23 2021
Maamulka caafimaadka Thai waxay qaadeen tillaabooyin ay si weyn u fududeynayaan sharciyada xashiishadda ee Thailand, iyadoo isbedelada siyaasadeed ay u oggolaanayaan beerashada ganacsi iyo shaqsi intaba heerka THC uu hooseeyo.
Toddobaadkii hore, Raiisel wasaare ku xigeenka Thailand iyo wasiirka caafimaadka Anutin Charnivarikul ayaa bayaan ku sheegay in ubaxa xashiishadda ee la qalajiyey aysan hadda ahayn qaybta 5 maandooriyaha, laakiin nuxurka THC waa inuusan ka badnaan 0,2 marka loo eego heerarka Ururka Caafimaadka Adduunka.
Bishii Disembar 2020, wasaaraddu waxay soo saartay qaybo ka mid ah dhirta aan lahayn maadada THC sare, sida caleemaha ama jirida, laakiin burooyinku waa ay mamnuuceen ilaa hadda.
Dadka raba inay koraan haramaha iyaga u gaar ah waxay samayn karaan xad la'aan, laakiin waa inay fasax ka codsadaan Xafiiska Komishanka Caafimaadka Qaranka ee Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Thailand gudaha Bangkok.
" Helitaanka ballaaran waa tallaabo muhiim ah oo lagu samaynayo xashiishadda, hemp, dalagga dhaqaalaha ee dadka Thai," ayuu yidhi Charnivarikul.
Cannabis ayaa ka bilaabmay Thailand
Toddobaadkii hore, Charnivarikul iyo wakiillo kale oo dowladda ah ayaa qabtay munaasabad "Cannabis kickoff on Mekong Bank" si ay u bilaabaan mashruuc tijaabo ah oo saaxiibtinimo oo haramaha ah oo lagu magacaabo Nakhon Phanom Model, kaas oo ku dhiirigeliya muwaadiniinta gobolka si ay u koraan oo ay lacag uga helaan xashiishadda.
Gobolka Nakhon Phanom waxay leedahay jawi ku haboon beerista xashiishadda waxayna u noqon kartaa tusaale beerashada, ayuu yidhi Charnivarikul.
Intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa la soo bandhigay goobo lagu iibinayo dawooyinka xashiishka, halka qaar kalena ay bixinayeen waxbarasho ku saabsan koritaanka. Waxaa jiray tabobarro ku yaal Sticks Thai, kalagoysyada sigaarka u eg oo lagu duudduubay ul bamboo ah oo ku dhex jira caleemaha marawaxada xashiishadda, oo lagu xidhay xadhig hemp.
Ujeedadu waa in dakhli badan loo soo saaro gobolka iyada oo kor loo qaadayo beerashada xashiishadda sababo caafimaad iyo dhiirigelinta dalxiiska beeraha.
Dhacdada ka dib, Charnivarikul wuxuu u safray degmada Sri Songkhram si uu u furo xarun wax lagu barto xashiishadda oo ku taal Suuqa Poonsuk ee Bangkok.
Bishii Ogosto, Thailand waxay diiwaan gashatay afar geed oo xashiish ah sida Dhaxalka Qaranka oo lagu magacaabo ST1, TT1, UUA1, iyo RD1.
Bishii Nofembar, Wasaaradda Caafimaadku waxay heshiis is-afgarad ah la saxeexatay RxLeaf World Medica si loo dhiso xaruntii ugu horreysay ee cilmi-baarista xashiishadda caafimaad ee caalamiga ah ee waddanka.
Sida laga soo xigtay Bangkok Post, wasaaraddu waxay sahamisaa siyaasado kala duwan oo ku saabsan hemp iyo kratom.
"Haddii dhaqaaluhu kor u kaco oo aynaan helin alaab cusub oo beddel ah, dadku waxay sii wadi doonaan inay sameeyaan wax la mid ah oo ay ku tartamaan midba midka kale. Laakiin haddii aan siinno doorasho, waxay baran karaan inay dhisaan taas oo ay abuuraan badeecooyin cusub iyo qaabab ganacsi, taas oo iyana soo dedejin doonta soo kabashada dhaqaalaha."
Ilaha ao BangkokPost (EN), Mugglehead (EN), NewsDirectory (EN)
cannabisbeerista cannabisxagashaKratomsharciyeyntasharci-dejintaThailandbeerista cannabis
Sidee kaabsoosha Kratom kaa caawin kartaa inaad si fiican u seexato?
Wasaaradda Thai waxay doonaysaa xashiishadda in lagu daro liiska dhaxalka ee UNESCO
Lubnaan waxa ay qarka u saaran tahay beerista xashiishadda...
Habka qaran dumisku waa uun...